FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DOCKER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika docker
Dachshund / Cocker Spaniel Alika mifangaro
'Bella dia Docker (Dachshund / Cocker Spaniel mix) 10 volana. Izy no zavatra mamy indrindra, nefa mety ho saro-kenatra be amin'ny olona tsy fantany raha tsy ao an-trano isika. Tiany ny mitsambikina sy milomano. Manao fanatanjahan-tena isan'andro ao an-tokotany izy ary mila miborosy farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro mba hahitany ny tsara indrindra!
Ny Docker dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Cocker Spaniel . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity ny alikako, Ladybird. 2 taona izy, ary fifangaroan'ny Dachshund / Cocker Spaniel. Alika be fitiavana sy mamy izy. Tena kivy be izy. Manan-janaka 4 izahay ary mankafy azy ireo tanteraka. Tiany ny mihazakazaka sy milalao amin'izy ireo, ary tiany koa ny mitaingina fiara. Ladybird dia tia biby hafa, fa izy kosa tia manenjika marokoroko sy bitro! Ampahafantariny antsika rehefa tsy maintsy manamboatra vilany izy, ary fantany izay fanaka mety hisy azy. Tsy hatakaloko na inona na inona eto an-tany ny Ladybird misy antsika! Izy no alika tsara indrindra nananantsika hatramin'izay! '
Ladybird the Dachshund / Cocker Spaniel mix (Docker) matory eo amin'ny farafara
Ladybird the Dachshund / Cocker Spaniel mix (Docker) amin'ny 2 taona
pyrenees mahafinaritra sy fifangaroan'ny dane mahafinaritra
manao ahoana ny taratasy akc
shiba inu chihuahua mifangaro toetra
afangaro chow chow sy mpiandry ondry alemanina
Charles mpanjaka cavalier afangaro miteraka
alika kely teraka amin'ny tsinay ivelan'ny vatana